Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel panzvimbo dzakakwirira dzekuverenga kwedhijitari | Gadget nhau
Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel pakakwirira kwekuverenga kwedhijitari
Villamandos | | Amazon, vaverengi
Nezuro chete Amazon zvakaratidza zviri nyowani Kindle Oasis, iyo inogona kutochengeterwa mutengo wakakwira, kunyanya kana tichifunga nezve mutengo wemimwe michina yerudzi urwu, kunyangwe isu tichitofungidzira kuti haina kufanana nemamwe maReaders anowanikwa pamusika kwete Kindle Voyage. Chaizvoizvo neyekupedzisira isu tiri kuzotarisana naye chiso nechiso kuti tione kusiyana kwavo, kufanana kwavo uye neruzivo rwakawanda runonakidza.
Isu tinorangarira kuti iyo Kindle Voyage yaive kusvika nezuro iyo yekupedzisira Kindle yakatangwa pamusika neAmazon uye kuti yakamira kunze kune ayo ane simba maficha uye yePrimiyamu dhizaini iyo wese munhu anga aine iyo mumaoko avo awira murudo nayo. Mutengo wacho waive zvakare wakakwirira chaizvo, asi hauna kuutadzisa kubva pakuva imwe yezvinhu zvinotengesa zvakanyanya mhando zvigadzirwa.
Kana iwe uchida kuziva kuti nei uchifanira kutenga chishandiso chimwe kana chimwe zvichibva pane kwavo kusiyana uye kufanana kwavo, ramba uchiverengaNekuti zvirinani kuti ruzivo rwakawanda urwo rwauri kuverenga pano ruchakufadza, uye iwe uchanzwisisa, semuenzaniso, kukwira kwemutengo weiyo Kindle Oasis kana ichienzaniswa neRwendo Rwomutsa.
Chekutanga pane zvese, tiri kuenda kuzoongorora akakosha maficha uye kudomwa kwese ari maviri Kindle;
1 Kindle Oasis Zvimiro uye Magadzirirwo
2 Kindle Voyage Zvimiro uye Magadzirirwo
3 Dhizaini, chinhu chinonetsa kunatsiridza
4 Screen, poindi yekufananidza pakati peaya maviri Mhando
5 Iyo Kindle Oasis kesi, iyo inosiyanisa uye yakasarudzika kutaridzika
6 Mutengo. Zvese zvishandiso zvinodhura
7 Mhedziso, duel munzvimbo dzakakwirira ine akahwina akahwina
Dhizaini, chinhu chinonetsa kunatsiridza
Dhizaini yeiyo Kindle Voyage yaive pasina mubvunzo yakaoma kwazvo kurova nechero chinhu Uye ndezvekuti sekutaura kwatamboita, nekukurumidza munhu anga ave nemaoko munhu aigona kuona kuti zvishandiso zvakashandiswa zvaive zvemhando yepamusoro uye kubata kweruoko kwaifadza. Amazon mune yayo nyowani Kindle Oasis yanga ichida kupa twist kune iyo dhizaini uye kunyangwe yakakwanisa kugadzira chakareruka uye chiine compact mudziyo, uye zvakare neruzivo rweyeyese nebhatiri yakavakirwa-mukati, haina kukwanisa kuipa iko kubata kwekubwinya kuti Rwendo.
Chimwe chezvinhu padanho rekugadzira chinogona kusimbiswa nezve iyi Kindle Oasis, zviyero ndezvekuti kambani inotungamirwa naJeff Bezos yakwanisa kugadzira chishandiso chakareruka. Uye ndizvozvo neumwe chete huremu hwemagiramu gumi nematanhatu, inowira kure zvishoma ne131 gramu yehuremu iyo iyo Kindle Voyage ine. Pamusoro pezvo isu tinowanawo chigadzirwa chine ukobvu husingagumi pane hwechinhu chero cheMhando chinogona kutengwa kusvika zvino pamusika.
Zvichida maererano nekugadzirwa, iyo Kindle Voyage iri pamberi peiyi Kindle Oasis, asi pasina kupokana izvo zvitsva padanho rekugadzira, zvinowedzeredzwa neanoshanda ayo iwo Mhando nyowani achatipa, ita kuti Oasis irege kuva nekubata kwekubwinya yekugadzirwa pachayo, asi maererano nedesheni zvimwe zvinhu.
Screen, poindi yekufananidza pakati peaya maviri Mhando
Dai isu tanga tine Kindle Voyage uye nyowani Kindle Oasis patafura, isu taikurumidza kuona shanduko mune zviyero zvemidziyo miviri, taizoona kesi nyowani nebhatiri rakavakirwa ratakapiwa neazvino Amazon eReader, asi isu hatingamboone chero mutsauko pachiratidziro chese e-mabhuku. Uye ndezvekuti isu tinogona kutaura kuti mune ese Mhando isu tichawana chakafanana skrini, yakavharirwa mune rakasiyana muviri.
Ose maratidziro ari 6-inch ane 15.2-centimeter diagonal, ine resolution ye 300 pixels pa inch, optimized font technology, uye 16 akasiyana grey masikero. Mumidziyo miviri tinowana zvakare mukana wekunakidzwa nechiedza chakabatanidzwa, chinozove chinonyanya kubatsira mumamiriro ekuderera. Musiyano chete watinogona kuwana ndewe tekinoroji yakashandiswa uye ndeyekuti kana tiri muRwendo rweMhando yeCarta e-pepa tekinoroji iripo, mu Kindle Oasis tinowana Paperwhite ine E Ink Carta. Ose matekinoroji akafanana chaizvo asi pane mumwe musiyano mudiki pakati pawo.
Iyo Kindle Oasis kesi, iyo inosiyanisa uye yakasarudzika kutaridzika
Chimwe chezvinhu zvinoita kuti iyi Kindle Oasis inyatso kuve pasina chakanakisa chatingawana mumusika, kuzvitonga kwayo. Kutenda bhatiri rayo hombe uye nebhatiri rekunze ratichawana mune iro kesi, tinokwanisa nakidzwa kuzvimiririra inosvika kumwedzi miviri nekushandisa zvakanyanya kana kushoma.
Uye zvakare, kuiswa mune iyi kifaa yekuchaja nekukurumidza kunoreva kuti isu tinogona kukanganwa nezvekuti tiite recharge yedu Kindle uye kuti zvakare inguva yatinofanira kuzviita, tinogona kuve takagadzirira mumaminetsi mashoma.
Iyo kesi, iyo inosanganisira, sezvatakataura, bhatiri rekunze, ndiyo imwe yemapoinzi anokwezva eiyi Kindle Oasis uye izvo zvakare zvinosiyanisa kubva kune zvimwe zvigadzirwa pamusika. Iyi kesi, iyo nenzira ine yakawanda masitayera kusiyana nemamwe makesi akagadzirwa neAmazon, haingotipe chete isu kuti tidzivirire yedu eReader kubva kune zvingangoitika kuvhunduka kana kudonha, asi zvakare inotipawo inonakidza functionalities, pakati payo bhatiri rekunze rinomira.
Zvichida mumusika senge emagetsi mabhuku, mune zvese kana zvese zvakatogadzirwa, chifukidziro chingave icho chinoita musiyano uye chobva chazove musiyano wakanyatsojeka.
Mutengo. Zvese zvishandiso zvinodhura
Pachinyakare nyika yekuverenga kwedhijitari yanga ichibatanidzwa nemidziyo isingadhuri iyo chero munhu aigona kutenga. Ose mairi Kindle Voyage, ayo parizvino ari kutengeswa ne189,99 euros mushanduro yayo yakachipa kwazvo, uye iyo Kindle Oasis iyo yakatanga mumusika nemutengo we289,99 zvakare mune yayo yakachipa kwazvo vhezheni, michina miviri inodhura, yekusareva inodhura kwazvo. Kuverenga iwe unogona kuverenga bhuku redhijitari pane chero chishandiso, asi pasina kupokana hapana imwe eReader inotipa izvo maficha ayo maviri Mhando inogadzirwa neAmazon anotipa.
Hapana kana kana hapana kana mumwe anoshandura maReaders gore rega kana maviri, uye Kunyangwe isu tiri kutarisana nemidziyo miviri inodhura chaizvo, kugadzira mari mune chishandiso cherudzi urwu chinobhadhara zvikuru. Iwo maficha, maratidziro uye mashandiro ayo aya maviri maMhando anotipa isu haawanikwe mune chero ripi zvaro rimwe bhuku remagetsi pamusika uye kana isu tikaedza mudziyo une mutengo wakaderera uyezve kuyedza iyo Kindle Vogaye semuenzaniso, iwe uchaona mutsauko nekukurumidza uyezve iwe Uchaona kuti kana iyo Kindle Voyage kana iyo Kindle Oasis michina miviri inodhura kune zvese izvo zvavanogona kukupa iwe munzira dzese.
Mhedziso, duel munzvimbo dzakakwirira ine akahwina akahwina
Parizvino isu takangokwanisa chete kunakidzwa neO Kindle Oasis kwemaminetsi mashoma muhurukuro iyo iyo Amazon Spain yakatikoka, asi ivo vaikwana kuti vaone kugona kweiyi eReader, iyo inogara kunyanya mushe iyo iyo Kindle Voyage yakanga put uye kuti kambani inotungamirwa naJeff Bezos yakwanisa kugadzirisa nekuvandudza iyi nyowani nyowani.
Dhizaini yayo, kureruka kwayo, chifukidziro chayo, kuzvitonga kwayo uye, senguva dzose, kugadzikana kwazvakaita kuverenga pane chimwe chezvinhu izvi zvimwe zvezvinopfuura zvinonakidza maficha. Chokwadi kana tikachiyedza zvakadzama tichawana zvimwe, kunyangwe isu tisingakwanise kukanganwa mutengo wayo, iri chokwadi chikonzero chekukakavara kune wese munhu, asi isu tinotenda nemoyo wese kuti inokodzera zvakawanda kubhadhara izvo zvakakosha iyi Kindle Oasis. kwatiri isu tinokunda duel iyi pakakwirira kwekuverenga kwedhijitari.
Ndiani waunofunga kuti ndiye anokunda duel iyi pakati peO Kindle Oasis uye iyo Kindle Voyage?. Iwe unogona kutipa iwe maonero ako munzvimbo yakachengeterwa makomenti pane ino positi kana kuburikidza nechero ipi yemasocial network matiri isu tiripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Gadgets » vaverengi » Kindle Oasis VS Kindle Voyage, duel pakakwirira kwekuverenga kwedhijitari
iyo Kindle Voyage iripo iyo Carta e-pepa tekinoroji, mune iyo Kindle Oasis tinowana Paperwhite ine E Ink Carta. Ose matekinoroji akafanana chaizvo asi pane mumwe musiyano mudiki pakati pawo. Uye chii chiri nani
Pindura kuna cristian
MusicAll, yemahara Spotify ye iPhone yako uye Android
Ongororo yeiyo iPhone SE, iwo mana ane simba masendimita eApple